VAKY BANTSILANA : Very an-javony sy vitavita ho azy ny raharaha | NewsMada
Ny vava tokoa leiretsy, tahaka ny vorodamba, mitsiatra atsy, mitsiatra eroa…Telo taona mahery izay no nilazan’ny filoham-pirenena fa ao anatin’ny telo volana dia ho foana ny delestazy. Ny lainga toy ny salaka ka ny tompony ihany no afatony. Izao miharihary toa vay an-kandrina izao ny zava-misy, sady maharary no mahamenatra. Tsy hita ny vahaolana matotra hamahana ny olana fa fanarihan-dia no be. Noveriverezina amin’ny resaka angovo mandeha amin’ny herin’ny masoandro sy ny rivotra indray ny rehetra, fa any, hono, no laharam-pahamehana. Dia mihevitra tokoa fa very an-javony sy vitavita ho azy ny raharaha. Sao leiretsy, hanao tahaka ny fary ka ny lohany indray no hatsatso. Tsarovy mandrakariva ny fahendren-drazantsika, “ny vava soa sakafo ary ny teny ratsy adidy”.
Adidy tokony hotanterahin’ny fitondram-panjakana amin’ity taona ity ny fifidianana lehiben’ny faritra sy ny lehiben’ny faritany. Mbola hahita ala olana hafa tahaka ny resaka delestazy indray ve ny fitondrana ny tsy hahatanteraka izany. Mivaombaona be tahaka ny rafi-dena ny fihetsiky ny mpitondra rehefa sendra mba mitsidika vahoaka. Henonao matetika any sahady ny resaka fifidianana filohan’ny Repoblika 2018, izay misarintsarina fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana. Mitsaha-ketriketrika tahaka ny sosoa voatapo-drano ny resaka fifidianam-paritra. Manjaka tanteraka ny kajikajim-politika. Tsy tanterahina izay voalazan’ny lalàmpanorenana. Arirarira tsy hahita ny rirany eny ireo heverina fa fifidianana manakaiky vahoaka. Dia ho vitavita sy tsy ho hitahita koa…
Milaza fa handray ny andraikitra sy fepetra hentitra ny eo anivon’ny mpitandro filaminana manoloana ny fitsaram-bahoaka miseholany etsy sy eroa. Moa ve mba nodinihin’izy ireo lalina ny antony mahatonga azy io? Anisan’izany ny tsy fahatokisan’ny vahoaka ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana. Eo koa ny tsy fatokisan’ny vahoaka ny mpitondra intsony vokatry ny tsy fanatanterahany ny teny izay nolazainy. Kobaka am-bava sy volana an-tena no maro. Ny vahoaka indray no antsafaina fa tsy misy mahantra intsony eto. Asa lasa fadiranovana daholo angamba? Miotrika ela ny alahelo sy ny fitarainan’ny vahoaka, saingy tsy misy mpihaino. Ireo izay mikofoka rehetra soketaina fa mpanongam-panjakana sy andefasana herim-pamoretana. Feno tokoa ny kapoaka sy ny mampitondra kapoaka mangidy, endrika iray tsy maintsy vahana io, mba tsy ho vitavita ho azy ny raharaha.
Tsy raharahain’ny fitondrana fa endriky ny fipoahana ara-tsosialy ny fisehoan’ny fitsaram-bahoaka etsy sy eroa. Endriky ny fandraisana andraikitry ny vahoaka amin’izay tsy vitan’ny mpitondra? Ho sanatria hamerina ny fahefana eo am-pelatanany ny vahoaka noho ny tsy fatokisany azy ireo. Tsy vitan’ny vono lolo sy vono vorona fotsiny ny fiatrehana ny zava-misy fa mitaky vahaolana maty paika. Tsy mijanona amin’ny fampahafantarana lalàna sy fandraisana fepetra fotsiny io. Mila mitsara tena ny mpitondra amin’ny ataony. Mitaky ny fanomezan-kasina ny vahoaka nanome fahefana. Na ho ela na ho haingana, tsy maintsy ho tonga ny fitsaram-bahoaka amin’ny alalan’ny fifidianana. Aleo ny tantara no hitsara…